Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup Iyaqhubeka kweleSouth Africa Abanye Behlutshwa yiVuvuzela
Emidlalweni yeFIFA Soccer World Cup edlalwe ngolweSine, iqembu Argentina linqobe ele South Korea nge 4 ka 1 kwathi i Greece yanqoba i Nigeria nge 4 ka 1. Umdlalo ophakathi kweFrance leMexico uyaqala nje kumizuzo embalwa elandelayo. NgolweSihlanu i Germany idlala le Serbia, iSlovenia izadibana leMelika kuthi i England izadlala leAlgeria.
Kunjlalo nje, ngemva kokuzitholela udumo olukhulu emidlalweni yenguqu yomhlaba yalonyaka, ivuvuzela yakwele South Africa isidale umsindo omkhulu phakathi kwalabo abathi kayivalwe lalabo abathi kayivuthelwe kuze kuse.
Akukapheli ngitsho leviki ivuvuzela ingene ngokokuqala enkundleni yezemidlalo lebhola lomhlaba kodwa isivuse omkhulu umsindo. Abanye abezindaba , abadlali, abaqeqetshi labonompembe bafuna ivuvuzela yenqatshelwe ukusetshenziswa emidlalweni yonke yenguqu yomhlaba esisele. Abezindaba bathi umsindo wayo ubaphekisa imboza ehlonzini lwamazwi afinyelela kubalaleli kubomabonakude lakuma radio.
Lokhe sisedabeni lweWorld Cup, intsha yeZimbabwe ethanda ibhola iphuma ngobunengi isiyamanyana lezinkunlungwane zabantu ababukela imidlalo yenguqu yeWorld Cup endaweni abazilungiselwe yififa ukuze babuke le imidlalo bendawonye.
Abatsha laba inengi labo abazalelwe lapha, bafunda lapha, okumanje sekungathi ngabalapha, bathi bayabonga i FIFA ngokubanikeza ithuba lokukholisa imidlalo yenguqu yomhlaba ikakhulu labo abangenelisinga ukuthenga yamatikiti. Ngenxa yokwazi ngobumphofu obugcwele i Africa yonkana iFIFA yaphuma le qhinga lokwakha indawo ezinengi elizweni lonke, zafakwa inkalakatha zabomabona kude. Selokhu imidlalo yenguqu iqalile lezi indawo zigcwala phamu ngalabo bantu abangathenganga amatikiti kodwa befuna ukubukela imidlalole bebanengi njengalabo abasenkundleni.
Udaba luka Benedict Nhlapho